Wasaaradda Caafimaadka oo wacyi galin ka wada qeybo ka mid Gobolka Nugaal. | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda Caafimaadka oo wacyi galin ka wada qeybo ka mid Gobolka Nugaal.
Wasaaradda Caafimaadka dowlada Puntland iyo Ha’yada world vision ayaa ka bilaabay deegaano hoos taga Degmada Dangorayo Wacyi galin iyo qeybinta agab wax tar u leh Bulshada si ay ugu hor tagaan nadaafad darada.
Deegaanadan ayaa ah 9 goobood oo xiligii abaarta Ha’yada Wordvision biyo dhaamin ka waday.
mr.Cabdulqaadir Burburshe oo ka socday wasaaradda Caafimaadka qeybta Fayadhowrka ayaa hadalo ka jeediyay waxaana ka mid ahaa” Wasaaradda Caafimaadku Waxay u xilsaarantahay laba wax oo kala ah ka hortag iyo Daaweyn, anagu hada waxaan wadna waa ka hortag iyo sidii bulshadu cudurada iskaga ilaalin lahayd,waxaana wadno waxaa ka mid ah Saabuun,Sakeelo,Biyo safeeye iyo Jirigaano, Ha’yada Worldvision ayaa biyo dhaamin ka waday goobahan xiligii abaarta.
Waa ka markale mr.Burburshe oo ka hadlaya”Biyihii Ha’yadu keeni jirtay waxay ahaan kuwo nadiifa ah oo la hubay meesha laga keenay,lakin hada waxaa la galay xili roobaadkii biyaha dadku cabayaan waxay ku jiraan togog aan nadiif ahayn sababtoo ah waxaa dhacday abaar xun oo xoolo badan dishay, xoolahas biyuhu soo qaadan waxy galayaan toga, waana wakhas cuduro keeni karta”.
Waxaa sidoo kale mahadcelin ka soo jeediyay qeybo ka mid ah Bulshada Maxamuud Cismaan Yuusuf oo ka mid oday dhaqameedka deegaanka Murcanyo ayaa uga mahadceliyay Wasaaradda Caafimaadka iyo Ha’yada World vision kaalmada ay had iyo jeer la daba taaganyihiin”.
Ugu dameeyntii Wasaaradda Caafimaadka ayaa ah mid isha ku haysa hadba xaaladaha Caafimaad daro ee dalka jirta miyi iyo magaalaba.